Iyo yakajeka gwara kunzira dzese dzekuchaja yako iPhone ne iPad | IPhone nhau
Iyo yekupedzisira gwara kune dzese dzinogona nzira dzekuchaja yako iPhone ne iPad
Apple yakabuda munzvimbo yayo yekunyaradza mukuburitswa kwazvino, ichitipa mukana wekuita mhando dzakasiyana dzekuchaja, kwemakore mazhinji iyo Cupertino kambani yakatibvumidza chete kubhadharisa nenzira yakakosha kuburikidza neKwayedza tambo, zvirokwazvo izvozvi hazvisi izvo zvinoita kuti iwedzere, asi inosiya mukana.
Kutengesa zvisina waya, kuchaja nekukurumidza, kubhadharisa mwero… Dzidza negwara rakajeka iri nzira yakanakisa yekuchaja yako iPhone kana iPad kuti uwane kwazvo mazviri. Semazuva ese, tinokukoka kuti ugare nesu, nekuti mu iPhone News iwe unowana iwo akanakisa ezvidzidzo uye magwara pamusoro peiyo iPhone ne iPad.
Izvo zvakakosha kuti isu titange tafunga nezve mamwe mazano tisati tatanga kushandisa zvakanyanyisa gwaro iri munzira dzakasiyana dzekuchaja iyo iPhone.
1 Idzi nzira nhatu dzekuchaja yako iPhone kana iPad
2 Standard kuchaja ne5W kana 12W adapteri
3 Kurumidza kuchaja pane iyo iPhone
4 Wireless kuchaja pane iyo iPhone
Idzi nzira nhatu dzekuchaja yako iPhone kana iPad
Loading standard: Ndiwo mubhadharo watinoitisa nemashaja akakosha akaisirwa mupaketi yezvigadzirwa zvedu, charger inosanganisirwa neiyo iPhone semuenzaniso ndiyo yakajairwa 5W, nepo iyo iyo iPad 2018 iri 12W.
Loading kutsanya: Iyo yatinowana ine USB-C Mheni majaja ane chaji inopfuura 12W, semuenzaniso iyo 18W imwe inosanganisira iyo iPad Pro 2018 package uye inogona kusvika kusvika ku30W zvichienderana nemusiyano.
Loading waya: Kubhadharisa kunoitwa kuburikidza neQi kuchaja inomira inomira iyo inoita chiito pasina kuunza tambo dzemuviri muchigadzirwa.
Iyi ndiyo misiyano iyo kambani yeCupertino inotipa, zviripachena kuti yega yega ine kunaka kwayo uye nekukanganisa kwayo, zvinoenderana zvakanyanya nemushandisi chaiye, mamiriro ekushandisa uyezve pachishuwo chedu chekudyara mari, zvakanaka 30W inokurumidza kubhadharisa pane iyo iPad kana iPhone chishandiso inogona kutibhadharisa kutenderedza makumi masere euros, unoda here?
Standard kuchaja ne5W kana 12W adapteri
Tine nzira mbiri dzekuchaja zvese iyo iPad uye iyo iPhone nenzira yakakosha. Yokutanga iri kushandisa 5W charger pane iPhone X. Nepo neiri charger inokosha isu tinotora maminetsi makumi matanhatu kuti tiwane 60% yekuchaja uye maminetsi anopfuura mazana mapfumbamwe kuti tiibhadhare zvizere, tinoona kuti tichishandisa yakakosha iPad charger, iyo inopa 190W yemagetsi, tinogona kuidzikisa kusvika ingangoita maminetsi zana nemakumi matatu kuti tiibhadhare zvizere.
Ndinogona kuchaja iyo iPhone neiyo iPad charger? Mhinduro ndeyechokwadi hongu, asi izvi zviri kure nekutumidzwa "nekuchaja nekukurumidza."
Saizvozvowo, iPad inogona kubhadhariswa neese maviri 5W adapter, iyo ichatipa nguva dzekuchaja dzisina kukodzera kutaurwa, senge neyechinyakare 12W charger iyo inosanganisirwa mupakeji uye ichatipa mhedzisiro, zvisinei, zvinobudirira kubuda mumatambudziko unogona kushandisa iyo iPhone network adapter. Muchidimbu, "inononoka" kubhadharisa nechaja yepamutemo uye tambo yakasimbiswa ichakubvumidza iwe kuti ushandise zvakanyanya kugona kwebhatiri rako sezvo risingatambure nekushushikana kwekukurumidza kana waya isina waya nekuda kwetembiricha yakakwira iyo yavanowanzo kukonzera. .
Kurumidza kuchaja pane iyo iPhone
Tichaongorora kuti ndeipi mhedzisiro iyo iyo iPhone X inogona kutipa isu nekumhanyisa kuchaja kwakasiyana kwakasiyana, uyezve tichazozvifananidza nemuenzaniso neyakajairwa iPad charger, iyo inopa 12W, kuitira kuti tikwanise kufunga kana tiri kunyatsotarisana nekumhanyisa kuchaja uye zvakanyanya kukosha, kana yakakosha kukosha kwakakosha kwehupfumi kwazvinoda.
Adapter 12W kusvika 50% > Inenge maminitsi makumi matatu nemanomwe.
18W adapta kusvika 50%> maminetsi makumi matatu nemashanu.
Adapter 30W kusvika 50% > Inenge maminitsi makumi matatu nemanomwe.
61W adapta kusvika 50%> maminetsi makumi matatu nemashanu.
Maonero angu ekutanga mushure meangu ega ruzivo uye musanganiswa weimwe bvunzo inoitwa nevamwe vatinoshanda navo kubva kune yakasarudzika midhiya ndeyekuti isu tinogona kutaura izvozvo pakati Iko kudyara pamari zero mutengo unopihwa ne12W iPad charger ine yechinyakare USB kune Mheni tambo, kuchinjira kune 30W USB-C kune Mheni adapter, iyo ingangoita mari ingangoita € 80, yaizotiponesa «maminetsi manomwe chete ekuchaja». Mubvunzo ikozvino ndewakuti, iwe unodisa here kune izvo zvinopihwa neApple yekukurumidza iPhone kuchaja?
Wireless kuchaja pane iyo iPhone
Kuchaja isina waya kwakakomberedzwa nenhamba yakanaka yengano dzakatenderedza iyo nekukurumidza painongomhara pane zvigadzirwa zvekambani yeCupertino. Kubva pa iPhone X zvichienda mberi (iPhone 8, iPhone XS uye iPhone XR) ese mamodheru anoenderana zvizere neyakajairwa Qi majaja, Izvi zvinoreva kuti Apple haina kupindira zvachose mune isina waya charger iyo iwe yaunoda kushandisa muzuva rako zuva nezuva, chimwe chinhu chisina kujairika kubva kuCupertino kambani. Nekudaro, nekuda kwezvikonzero zviri pachena waya yekuchaja yakanyanya kusimba pane yechinyakare tambo yekuchaja, izvo zvinoda kuti isu tiite mari ine mutoro zvakanyanya maererano nechaja uyezve nemamiriro ezvinhu atinoitisa iwo mubhadharo.
Kuchaja isina waya kazhinji kunononoka zvishoma pane echinyakare kuchaja pane iPhone X, idzi inguva yepakati yekuchaja nguva
Qi charger 5W mu60min> 38%
Qi charger 7,5W mu60min> 46%
Aya ndiwo marudzi maviri echaja isina waya inotengeswa neApple mumatanho ayo ekutengesa, kunyangwe chiri chokwadi kuti kune vechitatu-bato vatengesi vanovimbisa masimba akakwirira, hazvikurudzirwe kuisa iyo iPhone kune iwo tembiricha uye iwo asina-anozivikanwa marasha. Senguva dzose, iyo iPhone inosvika pakakwirira tembiricha kana isu tichishandisa isina waya majaja ayo angave asina kusimbiswa kana ehurombo hwemhando, Izvi zvinoreva kuti muzviitiko zvakawanda, zvichidarika madhigirii makumi matatu akapisa tembiricha, iyo iPhone inomutsa nzira yekuchengetedza inomira kuchaja foni (kazhinji inodarika 30% bhatiri) kudzivirira kupisa kunokanganisa bhatiri, nekuti zvakare Tinoziva, kupisa kwakanyanya kunodzikira kugona kwavo. Izvo zvakati, waya isina waya isingave chinhu chakashata, chero bedzi tichizviita tichifunga nezve tembiricha chinhu uye mhando yechaja yekushandisa. Isu takaongorora akawanda emhando Qi majaja aunogona kuona mune iyi link, uye vakachengeteka zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Iyo yekupedzisira gwara kune dzese dzinogona nzira dzekuchaja yako iPhone ne iPad
uye nechaja yeiyo nyowani macBook pro usb c… (87w) .. ndinogona kubhadharisa iphone / ipad?…
mune dzidziso inoshandura otomatiki sezvo iine zvinobuda pa20.2V-4.3A / 9V-3A / 5.2V-2.4A
PUBG Mobile inogadziridza kugadzirira kuuya kwemepu yechando nyowani: Vikendi
Tsvaga maitiro ekushandisa mamwe mabasa eiyo nyowani Apple Watch Series 4 neaya maApple mavhidhiyo